टर्की मा संकट BBVA हिट | अर्थव्यवस्था वित्त
टर्कीको संकटले BBVA लाई हिर्कायो
जोस रीसियो | | बैंकिंग, सामान्य अर्थव्यवस्था
BBVA लगानीकर्ताहरु चिन्ताको लागि पर्याप्त कारणहरू भन्दा बढी। एउटा सूचक मान टर्कीको अर्थतन्त्रमा अत्यधिक जोखिमको कारण स्पेनी इक्विटीले उनीहरूको सेयर मूल्य घट्न देखेका छन। यसको कारणले यसको मुद्राको मूल्य गम्भीर क्षति पछि गम्भीर समस्यामा परेको ठाउँ वाणिज्यिक युद्ध कि संयुक्त राज्य मा सम्मान संग तपाइँको देश को यात्रा गरीरहेको छ। केही वित्तीय विश्लेषकहरूले सोच्दैनन् कि हामी आर्थिक संकटको सुरूमा छौं जुन सम्पूर्ण संसारलाई असर गर्न सक्दछ।
यस अर्थमा यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि यस समयमा बीबीभीको एक्सपोजर ज्यादै उच्च छ, टर्की राज्यमा assets 84.000,००० मिलियन डलर (, 73.200,२०० मिलियन यूरो) मा वित्तीय सम्पत्ति रहेको छ। यो बिर्सिन सकिन्न कि स्पेनी शेयर बजारको सन्दर्भ सूचकांकको एक उत्तम निलो चिपहरू मध्ये एक, Ibex 35, Garati को लगभग आधा नियन्त्रण गर्दछ, ओटोम्यान देशको एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण बैंकिंग निकाय। यस कारणले गर्दा, फ्रान्सिस्को गोन्जालेजको अध्यक्षतामा रहेको वित्तीय समूहको सेयरहरू यस विगत शुक्रवार गिरावट आएको छ।
यो सबै, गर्मी अवधिमा जसमा यसले आफ्नो साना र मध्यम लगानीकर्ताको छुट्टीमा राम्रो हिस्सा समात्यो। किनभने आउँदो दिनमा वित्तीय सेयरमा शक्तिशाली र सेयरको सक्रियता सक्रिय हुन सक्दछ, वित्तीय र बजारमा नयाँ र अधिक आकारको गिरावटको जोखिमको साथ। यस बिन्दुमा कि धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छैन कि यी दिनहरू के गर्ने, यदि एकातिर राष्ट्रिय इक्विटीको यस महत्त्वपूर्ण मूल्यमा स्थिति पूर्ववत्। वा यसको विपरित, स्थिति मा रहन आशा छ कि BVVA सेयरहरू अधिक समय सम्म लामो अवधिमा उनीहरूको मान पुन: प्राप्ति हुन्छ।
1 शेयर बजारमा BBVA 5% भन्दा बढी खस्कियो
2 टर्की बैंकहरूमा डिलिनकियन्सहरू
3 बैंकमा लगानी रणनीतिहरु
4 के यो BBVA खरीद अवसर हो?
शेयर बजारमा BBVA 5% भन्दा बढी खस्कियो
टर्की स of्कटका प्रभावहरू महान् राष्ट्रिय बैंकको धितोको मूल्यांकनमा लामो समयसम्म आएनन्। किनभने वास्तवमा, यसको मूल्यह्रास%% नाघेको छ र यसले आईबेक्स535 लाई तानेको छ, शेयर बजार सूचकांकमध्ये एक हो कि आजको दिनमा सबैभन्दा बढी सजाय पाइएको छ। किनभने यो अज्ञात छ यदि सबैभन्दा खराब आउन बाँकी छ भने। अर्कोतर्फ, बैंकिंग क्षेत्र यो शक्तिशाली मुस्लिम राज्यमा पुगेको छ कि यो संकटको सबैभन्दा उजागर को एक रहेको छ। १% र २% बीच स्प्यानिश शेयर बजारको बाँकी बैंकहरुमा गिरावटको साथ, यद्यपि BBVA शेयरधारकहरु बीच उत्पन्न भएको अलार्ममा नपुग्दै।
यो परिदृश्य हो जुन सबै लगानीकर्ताहरूको लागि धेरै समस्याग्रस्त भएको छ किनकि स्प्यानिश वित्तीय कम्पनीसँग सम्बन्धित बैंकले भर्खरका हप्ताहरूमा केही पनि कम छोडेको छ। 2.500 मिलियन यूरो। सबै संकेत जुन विक्रेता र क्रेताहरू बीचको स्पष्ट लाभको साथ अघिल्लोको लागि स्पष्ट लाभको साथ संघर्ष सुरू गरिरहेको छ। कम्तिमा अहिले सम्म र यो यस हप्ता देखि वित्तीय बजार को विकास को जाँच गर्न आवश्यक हुनेछ किनकि यो लगानीकर्ताले लिनु पर्ने उत्तम रणनीति के हो भनेर देखाउन महत्वपूर्ण हुनेछ।
टर्की बैंकहरूमा डिलिनकियन्सहरू
टर्कीमा असर पर्ने संकटमा सबैभन्दा बढी मूल्यवान् हुनुपर्ने पक्षहरूमध्ये एउटा फ्रान्सिस्को गोन्जालेजको नेतृत्वमा रहेको बैंकको हो बजार शेयर टर्की देशमा १० प्रतिशत। यस नयाँ आर्थिक संकटलाई विश्लेषण गर्न केहि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन लगभग कसैले पनि आशा गरेन। जे होस् यसको विपरित, अपराधी स्तर वास्तवमै धेरै चिन्ताजनक छैन। यस समयमा 10% को नजिकै अवस्थित छ, यद्यपि पछिल्लो बाह्र महिनामा बढेको छ। जे भए पनि, ठूलो स्पेनिश बैंकको स्थिति सबै लगानीकर्ताहरु को लागी केहि नाजुक पलहरु को माध्यम बाट जाँदै छ।
यस समयमा हामीले यस वित्तीय समूहको अर्को ब्यापारिक नतिजालाई के हुन्छ भनेर पर्खनु पर्नेछ। यस स्टक बजार मूल्यमा अवस्थितिहरू अन्डु गर्ने वा नगर्ने सबैतिरका उद्देश्यनिर्देशनहरू दिन सक्ने बिन्दुमा। किनकि यो सत्य हो कि प्रायः केहि पनि हुन सक्दछ, किनकि धेरै वित्तीय विश्लेषकहरू चेतावनी दिइरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा, सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा यी कार्यहरूको छेउमा हुनु हो किनकि उनीहरू आउने क्वार्टरमा एक भन्दा बढी अप्ठ्यारो दिन सक्छन्। र यो दिनको अन्त्यमा के हो भन्ने हो भने यस परिस्थितिहरूलाई यस बैंकका लगानीकर्ताहरूले चाहेको थोरै चाहनाबाट बच्नु हो।
बैंकमा लगानी रणनीतिहरु
यस बिन्दुमा, तपाईंले अब उप्रान्त आफ्नो कार्यहरूसँग के गर्नु पर्ने हो सोच्नु पर्छ। किनभने प्रभाव मा, BBVA एक मान थियो कि थियो धेरै पक्का, तर त्यसले अगस्टको यी दिनहरूमा शेयर बजारमा गम्भीर पतनको सामना गर्यो। एक रिटेलरको रूपमा तपाईको रुचिको लागि धेरै अनुकूल नरहेको अपरेशनहरूबाट बच्न तपाईको सुरक्षाका लागि केही कार्यहरू गर्नु बाहेक तपाईसँग विकल्प छैन। यो के हो सबैको बारेमा हो, र यसको लागि हामी तपाइँलाई केहि प्रकारहरूको पर्दाफाश गर्दछौं जुन यी जटिल दिनहरूमा धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
यदि तपाईं BBVA मा स्थिति खोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो पर्खनु तपाईंलाई उत्तम लाग्छ नयाँ प्रवेश अवसरहरू शेयर बजार मूल्य मा। हो, अब सबै भन्दा उपयुक्त समय छैन, यो दूर हो। अचम्म मान्नुपर्दैन, तपाईसँग यस प्रकारको अपरेशनमा बढ्नु भन्दा पनि हराउनु पर्छ। कमसेकम दुई हप्ताको लागि तपाईंको निर्णयमा ढिलाइ गर्नुहोस् वा कम्तिमा यस गर्मी बिदाबाट तपाईं फर्केर आउँनुहोस्।
नसोच्नुहोस् कि BBVA सेयरको मूल्य धेरै सस्तो हुन सक्छ, किनकि यो निश्चित रूपमा हुन सक्छ एकदम उल्टो। यो कुरा भन्ने हो भने कि यो सबै अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्जहरूको सबैभन्दा विवादास्पद विकल्पहरू मध्ये एक हो र यो एक बेतुका निर्णयमा तपाईंको पैसा जुवा खेल्ने कुरा होइन, तर सबै समयपूर्वभन्दा माथि हो।
अर्कोतर्फ, यो बैंकले एउटा प्रदर्शन गरेन प्राविधिक पक्ष वास्तवमा ईर्ष्या योग्य, यदि होईन भने यसको विपरित विश्लेषकहरू र साना तथा मध्यम लगानीकर्ताहरूको बीचमा धेरै श doubts्का उत्पन्न हुन्छ। तपाइँको अपरेशन्सबाट टाढा रहनको लागि यस प्रासंगिक डेटाको फाइदा लिनुहोस्। किनकि अन्तमा तपाईं कुनै पनि लगानी रणनीति जित्नुहुनेछ जुन तपाईं यी सटीक क्षणहरूबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ।
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने द्रुत कार्यहरू अवश्य पनि, तपाइँलाई यस विशेष लगानी प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि उत्तम मूल्यको सामना गर्नु पर्दैन। यस अर्थमा, तपाईं यो भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न कि यस वित्तीय समूहको सेयरहरू हाल धेरै तल तनावमा छन्। किन तपाइँको वित्तीय योगदान जोखिम?
यो सत्य हो कि तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ कम मूल्य अर्को र यस कारणका लागि यो आपरेशनमा अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुँदैन। तपाईंले तातो किन्नुहुन्न किनकि तपाईंले पक्कै गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यस समयमा कारबाही गर्नु हुँदैन जब स्पेनिश बैंकको सेयर क्षतिग्रस्त छ।
यदि, अर्कोतर्फ, तपाईंसँग खुला स्थानहरू छन्, यो सही समय होईन नहल्नु। यदि तपाईं केहि दिनहरू BBVA सेयरहरू कसरी विकसित भएको हेर्नको लागि प्रतीक्षा गर्नुभयो भने यो धेरै बढी समझदार हुनेछ। अर्को एकदम भिन्न चीज भनेको शेयर बजारमा झरनाहरू हरेक दिन र विशेष तीव्रताका साथ हुन्छन्।
के यो BBVA खरीद अवसर हो?
केहि सानो र मध्यम आकारका कम्पनीहरूले यस समयमा सोच्न सक्ने भए पनि, BBVA व्यापार अवसर होइन। यदि होईन भने, यसको विपरित, यसको प्राविधिक पक्ष उल्लेखनीय रूपमा खराब भएको छ। टर्कीमा संकट सुरु हुनु अघि यो अवस्थाको शुरुवातमा फर्किन धेरै खर्च लाग्ने कुराको कुरा छ। हो, त्यहाँ अन्य ठूला बैंकिंग समूहहरू छन् जुन स्थिति लिन अधिक अनुकूल छन्। उनीहरूको टर्की जडानमा आफैलाई जोखिम बिना। अर्को धेरै फरक कुरा यदि तपाईंको बसाइ अवधि छ मध्यम र लामो। यस अवस्थामा, गत हप्ताको अन्तमा भएको उनीहरूको मूल्यहरूमा छुटको साथ बीबीभीए सेयरहरू किन्नु चाखलाग्दो हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, बैंकि sector क्षेत्र एक व्यवसाय क्षेत्र हो जुन तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय इक्विटीमा यी एटिपिकल दिनहरूको समयमा टाढा बस्नुपर्दछ। यो तपाईले अहिले लिन सक्नुहुने उत्तम शर्त होईन। तपाईंसँग अन्य थप रक्षात्मक क्षेत्रहरू छन् जुन तपाईंले गर्न लाग्नु भएको लगानी रणनीतिहरूमा कम जोखिमको साथ प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्नु हुँदैन कि बैंकहरूले यसलाई लामो अवधिमा गलत बनाउने छन्। धेरै कम छैन, तर तपाईले मानहरू सम्बोधन गर्नुपर्दछ जुनaमुनिको अन्तर्गत हुन्छ uptrend धेरै स्पष्ट अन्य प्राविधिक विचारहरू पछाडि र पनि मौलिक दृष्टिकोणबाट हुन सक्छ।
अन्तमा, तपाईले सम्झनु पर्छ जस्तो हामीले पहिले नै बुझिसक्यौं कि तपाईले अर्को केहि कम मूल्यहरू पाउन सक्नुहुनेछ र यस कारणले तपाईलाई इक्विटी अपरेशन्समा अगाडि बढ्न विवेकी छैन। यसमा कुनै श is्का छैन कि यस गर्मीमा तपाइँले कम मूल्यहरू र अहिलेको तुलनामा बढी चाखलाग्दो मूल्याval्कन क्षमताको साथ पाउन सक्नुहुन्छ। किनभने स्टक बजारमा, हडबड गर्नु राम्रो सल्लाहकार हुँदैन, र यो BBVA सेयरहरूको लागि पूर्ण सत्य हो। कुनै पनि गलत कदमले तपाईं वित्तीय बजार मा धेरै पैसा गुमाउन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » टर्कीको संकटले BBVA लाई हिर्कायो
यदि कार्ड हराएको वा चोरी भएको छ भने के गर्ने?
सूचीबद्ध कम्पनीको दिवालियापनलाई के हुन सक्छ?